ZANU PF, Military In Support of 31 July Demo: Ngarivhume - ZiMetro News
Home LOCAL NEWS ZANU PF, Military In Support of 31 July Demo: Ngarivhume
ZANU PF, Military In Support of 31 July Demo: Ngarivhume
OPPOSITION Transform Zimbabwe leader and organiser of the July 31 national protests against corruption, Jacob Ngarivhume has hit back at Zanu-PF commissar Victor Matemadanda over claims the citizen action was a western ploy to spread coronavirus in the country.
The Zanu-PF senior politician said the west, which has been hardest hit by the global pandemic, found the planned Zimbabwean protests as an opportunity to discharge teargas canisters laden with the virus, among locals.
“For him to say the people of this nation cannot think beyond Zanu-PF, the people of this nation cannot think beyond corruption, is a mentality which is completely detached from the needs of the people Zimbabwe.”
The opposition leader said Zimbabweans set to take part in the planned protest were not just from the opposition but Zanu-PF as well.
“We are getting a lot of support from Zimbabweans who are members of Zanu-PF, Zimbabweans in different institutions, civil society, in business, Zimbabweans in the police, Zimbabweans in the military, want us to speak against corruption,” he said.
“So in another words, he feels he needs to be protected amidst the corruption which is impoverished the nation, this is unfortunate and this is the Zimbabwe we do not want.” – New Zimbabwe
31 July Demo
Previous articlePearl Thusi “asking for an entanglement”
Next articleMagaya promises to deliver houses he promised